Warbixinta 'BrightTALK Benchmark Report': Dhaqanka ugu Fiican ee Kor Loogu Qaado Shabakadaada Webinar | Martech Zone
Sabtida, Juun 14, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
BrightTALK, kaas oo daabacayay xogta aasaasiga ah ee webinar tan iyo 2010, wuxuu falanqeeyay in kabadan 14,000 webinars, 300 million emails, quudin iyo dhiirrigelin bulsho, iyo wadar ahaan 1.2 milyan saacadood oo hawlgal ah sanadkii lasoo dhaafay. Warbixintan sanadlaha ah waxay ka caawineysaa suuqleyda B2B inay isbarbar dhigaan waxqabadkooda iyo kuwa warshadooda ayna arkaan dhaqamada u horseeda guusha ugu weyn.
Soo Degso Warbixinta Qiimeynta
Sannadkii 2017, kaqeybgalayaashu waxay qaateen celcelis ahaan 42 daqiiqo daawashada webinar kasta, boqolkiiba 27 ayaa kordhay sanad-ka-sanadkii 2016.
Beddelada emaylka ee is-qoritaanka webinar waxay ahaayeen boqolkiiba 31 laga soo bilaabo sanadkii hore, natiijo toos ah oo ka timid suuqleyda 'fikradahooda hagaagsan ee mowduucyada doorbidaya.
Wadarta mugga websaydhka ku yaal barxadda BrightTALK kordhay 40 boqolkiiba sanad ka badan, oo soo jeedinaya in websaydhyada iyo wadahadalada xirfadleyda ah ay yihiin aalad sii kordheysa oo muhiim u ah iibinta sheekooyinka suuqleyda.
Webinars-ka ayaa isku beddelaya on-baahida video content. Ku dhowaad nus ka mid ah daawashada webinar waxay dhacdaa 10-ka maalmood ee ugu horreeya ka dib dhacdada tooska ah.
Sida ugufiican ee loo dardar geliyo websaydhkaaga
Waxaa laga yaabaa in macluumaadka ugu qiimaha badan ee aan ka helay warbixinta ay ku saabsan tahay xeelado si kor loogu qaado websaydhkaaga si loo kordhiyo xaadiritaanka. Macaamiishayada, websaydhku waxay sii wadaan inay noqdaan khayraad aan caadi ahayn oo hogaamiyayaal ah. Waxaan ogaanay in dadka kaqeybgalaya websaydhka ay caadi ahaan qoto dheer yihiin wareegga wax iibsiga oo ay raadinayaan inay ansaxiyaan ama wax badan ka bartaan maalgashiga ay sameyn doonaan. Arrintu waa, dabcan, sida loo wado rajada badan ee aad kartid halkaas.
Mahadsanid - BrightTALK waxay ku siisaa waxqabadyo wanaagsan oo fiican halkaas:
Barnaamijyada Webinar waxay arkaan guusha markay yihiin hore loo dalacsiiyay (toddobaadyo 3-4 ah), oo sii wad maalinta nool.
Inta badan dhagaystayaashaadu waxay lahaan doonaan diiwaan gashan laba toddobaad gudahood dhacdada tooska ah. Qiimayaashani waxay ahaadeen kuwo isdaba joog ah seddexdii sano ee la soo dhaafay.
Brighttalk waxay kugula talineysaa dirista saddex dallacaad email u heellan, oo leh kan ugu dambeeya maalinta webinar laftiisa.
Beddelka emaylka for webinars waxay ahayd 31% 12-kii bilood ee la soo dhaafay, iyo 35% dhammaadkii usbuuca
Heerarka isku-beddelka ee loogu talagalay dhiirrigelinta websaydhka ayaa runtii ahaa kuwo siman intii lagu jiray usbuucii shaqada, iyadoo Tuesday ugu fiican.
Qiimaha kaqeybgalka tooska ah waa siman yahay Isniinta ilaa Khamiista laakiin ku dheji 8% jimcaha.
The waqtiga ugu fiican ee jadwalka webinar waa 8:00 am ilaa 9:00 am (PDT, North America).
BrightTALK Macaamiisha waxay kexeeyeen 46% diiwaangelintooda websaydhka iyagoo u maraya dallacsiintooda (emaylka, xayeysiinta, bulshada, iwm) oo leh hogaamiyayaal lacag leh ayaa kudhawaaday 36%. 17% hoggaamiyeyaasha waxay ka yimaadeen taraafikada dabiiciga ah.
Waxaan kugula talin lahaa inaad soo dejiso oo aad aqriso warbixinta buuxda ee BrightTALK ay wada dhigtay, waxaa jira qiime aad u qiimo badan oo ku jira warbixintan cabirka ah!
Ku saabsan BrightTALK
BrightTALK wuxuu kulmiyaa xirfadlayaal iyo ganacsi si ay wax u bartaan una koraan. In kabadan 7 milyan oo xirfadlayaal ah ayaa lashaqeeya in kabadan 75,000 oo wadahadalo bilaash ah iyo 1,000 kulan oo khadka tooska ah ah si loo helo teknoolojiyad cusub, waxna looga barto khubaro lagu kalsoon yahay lana kobciyo shaqooyinkooda. Kumaan kun oo ganacsato ah ayaa adeegsada waxyaabaha ku shaqeeya BrightTALK ee AI ku shaqeeya waxayna dalbadaan madal suuq geyn ah si ay dakhli ugu koraan. BrightTALK waxaa la aasaasay sanadkii 2002 waxayna uruurisay in kabadan $ 30 milyan oo raasumaal ah. Macaamiisha waxaa ka mid ah Symantec, JP Morgan, BNY Mellon, Microsoft, Cisco, iyo Amazon Web Services.
Tags: dhalashosuuq-geynta suuqaSuuqgeynta Webinarsuuqgeynta webinardhiirrigelinta webinar